I-Yankalilla Farm Stay "Moana Views" Izilwanyana zasekhaya zivumelekile 🦮🐓 - I-Airbnb
I-Yankalilla Farm Stay "Moana Views" Izilwanyana zasekhaya zivumelekile 🦮🐓
Le ndawo ye-studio yangasese kunye nekhululekile imiselwe ngokugqibeleleyo abo bafuna ukuva ilizwe kunye nolwandle ngexesha elifanayo. Imi kwiihektare ezi-5 ekwamiselwe amahashe, iMoana Views inika ithuba lokuba iindwendwe zihlale ngelixa zijonga imimangaliso ekhoyo kule ndawo. Okanye mhlawumbi wothule kwaye ungcamle isampulu yeewayini zethu zasekuhlaleni endaweni yoko; emva koko kukho umqhubi omfutshane ukuya eNormanville naseCarrickallinga Beach okanye mhlawumbi ungakhwela ihashe lakho endaweni yoko, ukhetho lolwakho!
Kutshanje ihlaziywe kwaye yangoku, igumbi lesitudiyo linyulwe kakuhle linazo zonke izinto ezifunekayo ukuze zilawuleke. Ekuqaleni yayiyishedi yethu eyayimi isithixo, ngoko ke umyeni wam wokudala wagqiba kwelokuba akhe indawo emangalisayo yokuhlala!
IMoana Views ibekwe kufutshane nezinto ezikhangayo zasekhaya ezifana neShrine of Our Lady of Yankalilla, The Historical Museum, Heysen Trails, Ingalla Waterfalls, ii-wineries ezininzi zasekhaya, iSecond Valley, iCape Jervois-apho unokuthatha iSealink Ferry ukuya eKangaroo Island kwaye I-Deep Creek Conservation Park ukukhankanya iindawo ezimbalwa ezinomtsalane.; Zonke ezo zifikeleleka ngaphakathi kwemizuzu engama-30 yokuqhuba. Kwaye ulwandle lwethu lwasekhaya eNormanville lumalunga nemizuzu emi-3 kuphela yokuqhuba.
Igumbi lesitudiyo / i-cottage yenzelwe induduzo kunye nokufudumala engqondweni kwaye iqulethe ikhitshi, i-microwave, isitovu segesi, umphezulu ophuma entloko, iti kunye nezibonelelo zekofu, izixhobo zombane, izinto zokupheka (ukuba awufuni ukuthatha inxaxheba kwindawo yasekhaya. iindawo zokutyela kule ndawo), indawo yokutyela, kunye negumbi lokuphumla elinomabonakude edongeni. Kukho negumbi lokuhlambela elahlukileyo elinendlu yangasese kunye neshawari, indawo yokuhlala yangaphandle enezixhobo ze-BBQ kunye nebhodi yoku-ayina, intsimbi kunye neemveliso zokucoca njenge-vacuum cleaner njl.
Emva koko kukho inqanaba lokuya kwigumbi lokulala elibanzi kunye nendawo yokuhlala enendawo yokufunda, kunye newodrophu, ibhedi ekhululekileyo yobukhulu kunye neetafile ezimbini ezisecaleni kwebhedi. Ngaphezu kwebhedi uya kuqaphela ukuba kukho izibane zesibhakabhaka ezibini ezikunika ithuba lokuzitsala zivale ibhlokhi epheleleyo, okanye uzishiye zivuliwe ukuze ubone inyanga kunye neenkwenkwezi ebusuku ukuze ufumane amava apheleleyo okuziva kunye. indalo kamama!!. Intonga eyenza ukuba uvule okanye uvale i-shutters, ibekwe kwikona kufuphi nebhedi.
Xa ungena, thatha umzuzwana ujonge umgangatho omangalisayo weterrazzo obekwe ngumyeni wam uJoe! Kum yenza ukuba igumbi le studio liphume kwaye ndiyazingca ngalo!
Uya kufumana ihashe elibuza kakhulu kwipropathi elithanda i-pat kunye nekarothi, izinja ezimbalwa ezinobuhlobo kunye nekati eya kukulandela ngeenxa zonke (ngoko ungalushiyi ucango lwakho luvuliwe- njengoko beya kungena ngaphakathi) kunye neechoki. kunye namadada endiwabiza “njengamantombazana am”. Amaqanda amatsha asefama asimahla ayafumaneka ukuze uwapheke kwaye akwifriji yakho kwigumbi lesitudiyo (kwaye anokuyeka ukubeka ngexesha leenyanga ezibandayo zasebusika ngelishwa).
Ukuba unqwenela ukuza namahashe akho (ukuya kuthi ga kwi-2) ndiyafumaneka ukubhukisha ukhenketho olukhokelwayo lokukhwela kwindawo nge-30 yeedola ngeyure, kubandakanya nolwandle ukuba ungumdlalo wokukhwela kwilokishi yaseNormanville. Indawo yokupaka i-float iyafumaneka kwaye amahashe akho anokukhutshelwa kufutshane nawe.
Nceda uqaphele: Onke amaphedi afakwe umbane, ngoko ke ingqondo yakho ibambe iintambo zocingo kwaye andilwamkeli uxanduva lokhuseleko lwamahashe akho, ukuba unokuthatha isigqibo sokuza nawo.
Ukuba unqwenela ukuzisa usana lwakho oluxabisekileyo loboya (inja okanye ikati), kukho intendelezo yabucala ngaphandle kwendlwana ehlala inja, ngokukhethekileyo inja encinci ukuya kwephakathi, njengoko izinja ezinkulu zinokufumana iyadi yangasemva incinci kakhulu kwaye inokuhendeka. ukubaleka egadini endizama ukuyimisa. Nangona kunjalo, ukuba kukho ukuzibophelela ekuqinisekiseni ukuba uyayigada inja yakho ngamaxesha onke, kunye nokuqinisekisa ukuba ikwi-leash kwaye ayishiywanga izibuza malunga nepropati, inja enkulu inokuthi ilungile ukunika isimo sayo esifanelekileyo. Kungcono ukuba undibuze kuqala phambi kokuba ubhukishe. Nceda uqinisekise ukuba uqokelela kwaye uwalahle “amakhadi abo okufowuna” ngaphambi kokuba uhambe nawe.
Kwakhona qaphela ukuba ipropathi ibekwe kumda wendlela emdaka enokuthi ngelishwa ibangele amavili anothuli emotweni yakho. Ebusuku, kunokubonakala kumnyama kunesiqhelo xa uqhuba, njengoko kungekho zibane zesitrato. Kodwa ukuba uceba ukufika ebusuku, ndihlala ndishiya izibane zam zebala lehashe zikhanyisiwe kwakunye nezibane zendlu yam ukuze zikhanyise ukuze ndikubonise apho sikhoyo.
Ukongeza, ngenxa yokuba ipropathi yethu iyifama, umhlaba ugcwele izinyuko ezikhokelela kwigumbi le studio, ngoko ke ayibafanelanga abantu abanemiba ye-ambulatory, ke nceda ungabhuki ukuba ufuna uncedo lokuhamba, njengoko uya kuba nemiba yothethathethwano. izinyuko ezikhokelela kwigumbi, okanye indlela ekhokelela emnyango ngokunjalo.
Nceda uqaphele: I-NBN ayifumaneki (kungoko akukho kufikelela kwi-intanethi ngenxa yophawu olubuthathaka kwindawo yasemaphandleni) kwaye ngelixa ndibonelela ngamaqanda amatsha asimahla kuluhlu lwam lwasimahla "lwamantombazana" efrijini, kwaye ndinezinye izinto zesidlo sakusasa. njengeengxowa zesidudu ezifumanekayo, andiboneleli ngazo zonke izibonelelo zesidlo sakusasa ngesidlo sakusasa esigcweleyo kwaye izibonelelo endizibonelelayo azinyanzelekanga (njengebhonasi) kuwe ngoko ziyancomeka. Ndiye ndohlwaywa amaxesha ambalwa ngenxa yokungaboneleli isidlo sakusasa kwiindwendwe ezingathandi amaqanda okanye ubisi njl njl, kodwa nceda uqaphele ukuba ndenza oku ngenxa yobubele bentliziyo yam, kwaye abo baxabisa oku kongezelelweyo, ibhonasi.
Kukho i-toaster, indawo yokupheka kunye ne-Baby Weber Q BBQ ukuba unqwenela ukupheka i-bacon yakho kunye ne-toast, njl. ICafe okanye uDade omncinci eNormanville.
Sijonge ekwabelaneni nawe ngendawo yethu entle nenoxolo apha eMoana Views.
Ukusuka kumamkeli wakho
Anthea (kunye noMishka, uRusty, uMnumzana Darcy, uCharlie kunye namantombazana).
4.92 · Izimvo eziyi-292
Zombini ezi lokishi zintle kwaye zinembali kwiindawo, kwaye zibonelela ngoluhlu lwezidlo ezinesidima, kodwa ezingabizi kakhulu ukuya kuzo.
Nanjengoko sihlala emaphandleni elokishini, iindlela azivalwanga kwaye azikho nezibane zasezitalatweni, kodwa ndiyavuya ukushiya izibane zam zikhanyise ukuba ukungena kwakho kusebusuku ukuze ufumane indawo ngaphandle kwengxaki.
Inokuba ndim okanye umyeni wam uJoe uya kukuvuyela ukwamkela izicelo zakho. Njengoko sisebenza sobabini, sinokufuna ixesha lokuphendula isicelo sakho kodwa sizame ukukunceda ngalo lonke ixesha lokuhlala kwakho. Kwimeko endingakwaziyo ukubakho ukuze ndikubulise ngexesha lokukhangela, ndiya kuthumela ngokujonga ngokwakho kwimiyalelo onokuthi uyilandele.
Uhambo olukhokelwayo lokukhwela ukuya elunxwemeni okanye kwiindledlana zelizwe elinesandi zinokulungiswa ngam (Anthea) kodwa kufuneka uze namahashe akho njengoko u-Ive enehashe lam kuphela lokukhwela. Ndibiza i-$40 ngeyure. Ngelishwa andikwazi ukuvumela iindwendwe ukuba zikhwele ihashe lam, ngenxa yezithintelo ze-inshorensi (kodwa uya kuyithanda ukuba umphathele ikherothi kwaye ufuna ukuxhoma wethu nawe endaweni yoko).
Inokuba ndim okanye umyeni wam uJoe uya kukuvuyela ukwamkela izicelo zakho. Njengoko sisebenza sobabini, sinokufuna ixesha lokuphendula isicelo sakho kodwa sizame ukukunceda ngalo…
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Yankalilla